किन टाँगिन्छ ढोकामा कागती र खुर्सानी ? कहिले र कसरी टाँग्ने ? – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/किन टाँगिन्छ ढोकामा कागती र खुर्सानी ? कहिले र कसरी टाँग्ने ?
हामीले प्रायःजसो ढोकामा कागती र खुर्सानी टाँगेको देख्छौं। कसैले घरमा त, कसैले पसलमा यसरी टाँग्ने गरेका हुन्छन् । यसले नराम्रो नजर र नकारात्मक शक्तिबाट बचाउँछ भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर, यसको वास्तविकता हामीले सोचेको भन्दा फरक छ ।
कागती र खुर्सानीलाई सँगै राखेर ढोकामा टाँग्नुका पछाडि विभिन्न कारणहरु छन् । खासमा वास्तुदोष ठीक गर्नका लागि यो तरिका अपनाइएको हो । साथै वरिपरि सकारात्मक ऊर्जा बनाइराख्न कागतीले मद्दत गर्ने हुनाले पनि यसो गरिएको बताइन्छ ।कागतीको रुखलाई सकारात्मकताको प्रतिक मान्ने मानिसहरुको भनाइ छ । त्यसैले सबैको घरमा कागतीको रुख सम्भव नभएकाले त्यसरी टाँगिने गरिन्छ ।
त्यस्तै अर्को कारण कागतीको गन्धले ताजगीको अनुभूति गराउँछ । यसरी कागती टाँग्दा त्यसमा प्वाल पार्नुपर्ने भएकाले उक्त वासनाले सक्रिय बनाइराख्ने मानिसहरु बताउँछन् ।
गाडिमा किन टाँगिन्छ ?
केबल घर र पसलमा मात्र होइन, कतिपय गाडीमा समेत यसरी कागती अनि खुर्सानी टाँगेको देख्न सकिन्छ । यसले दुर्घटनाबाट बचाउँछ भन्ने अन्धविश्वासका कारण यस्तो गरिएको हो । यसको वैज्ञानिक कारण नभएपनि मानिसहरुले धेरै पहिलेबाट यो चलन अपनाउदै आएका छन् ।
कहिले र कसरी टाँग्ने ?
यसलाई टाँग्दा कागतीलाई सबैभन्दा तल र त्यसमाथि खुर्सानी राख्ने चलन छ । यसलाई विशेषगरी मंगलबार र शनिबारका दिन टाँग्ने गरिन्छ र हरेक हप्ता बद्लिन्छ ।